Uphiko Lwezilimi Kuzwelonke - Wikipedia
Uphiko lweziLimi kuZweIonke (NLS) lugqugquzela futhi lwenza lula ukuxoxisana ngezilimi ezahlukene. Ekuzameni ukuhambisana nokushiwo uMthethosisekelo i-NLS ilawula ukwehlukahluka kwezilimi emphakathini wethu futhi kuwumthwalo wayo ukwakha ubudlelwano kuzo zonke izilimi zabantu bakuleli ngokusebenzisa lokho okushiwo yinqubomgomo ngenhloso yokuthi kugqugquzelwe ukusentshenziswa kwalezi zilimi, kanye nazo zonke izilimi ebezinganakiwe emlandweni wakuleli. Kwalezi silimi ngenhloso ezahlukene ilawula kwezilimi nemikhankaso izidingongqangi AmaZulu ongumongo wakuleli.
Umsebenzi ongumongo we-NLS ukugcina izidingongqangi zoMthethosisekelo, ngokugqugquzela, ukukhuthaza nokuhlinzeka izinsizakalo zokuhumusha nokuhlela kuzo zonke izilimi ezisemthethweni kanye nokulawula ukuwehlukahluka kwezilimi ngokuhlela izilimi nemikhankaso yobuchwepheshe bamagama (terminology).
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Uphiko_Lwezilimi_Kuzwelonke&oldid=45718" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-18 uNdasa 2018, nge-14:21.